GOORTA IYO SIDA LOO JAJABIYO PEONIES KA DIB UBAX - SOOSAARKA DALAGGA
Xeerarka lagu xoqdo peonies ka dib ubax
Peony - jecel ee bannaanka u badan iyo qurxinta hadda sariirta ubaxa. Si loo oggolaado in dhirta loo nasto iyo dib u soo kabashada ka hor xilliga qaboobaha, iyo sidoo kale si loo hubiyo qoyaan ku filan caleemaha mustaqbalka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu fujiyo inflorescences waana in si sax ah loo sameeyaa.
Marka, iyo ugu muhiimsan, sida loo xoqo peonies ka dib ubax, waxaan eegaynaa maqaalkan.
Goorma ayay ka fiican tahay in la gooyo?
Dhammaan beeralayda novice ma yaqaanaan waxa la samaynayo manjooyin isla markiiba ka dib markii ay peonies ayaa yaraaday - burburiyay geedka. Sug ilaa inta caleemaha oo dhan iyo burooyinkeeda u engegay. Next waa in la gooyaa buro iyo qayb ka mid ah asliga ah, laakiin caleemaha waxaa ugu wanaagsan ka tagay aan la taaban karin, iyada oo iyaga oo iyaga oo ah awoodda ah ee burooyinkoodii mustaqbalka. Wakhti ku haboon oo arrintan ku dhicid illaa dhammaadka Juun. Labada bilood ee soo socda, xididdada ayaa xoog ku yeesha iyada oo aan la gooyeen afkoda, kadibna kaliya waa jarida qaybta dhulka ee geedka. Marka ay peonies "jiifsadaan", u gooyaa istaagyada jiilaalka hoosta hoostiisa, ka tagidda jirridda 1-2 centimitir dheer oo daboolaya qabow.
Waa muhiim! Gooyooyinka laamihii jabay iyo caleemaha qalalan ee ay duurka u geed waxaa la fuliyaa April, manjooyin soo socda waa lagama maarmaan ka dib markii burooyinkoodii Bloom. Iyo peonies cows ayaa la diyaariyey jiilaalka, gebi ahaanba jaray qaybta dhulka ee dayrta.
Kormeerida shuruudaha qaarkood ee geeddi-socodka xajinta peonies xilliga dayrta, waxaad heli doontaa warshad ubax ah ubax sanadka soo socda.
Raac talooyinkan jaranjarada:
Waqtiga ugu haboon ee lagu yareeyo pion ee jiilaalka waa qeybtii labaad ee October, marka miraha ugu horeeya ee weeraro.
Waxa lagama maarmaan ah in la jarjiyo qaybta dhul-galka ee geedka oo dhan, oo ka dhigaysa mid yar.
Iska yaree caws, laanta caleemaha iyo caleemaha waa in laga saaraa goobta halkaas oo baadiyaha ay weli ku badan yihiin, haddii kale waxay u adeegi doonaan jawi horumarinta cudurada fungi iyo cudurada.
Haddii dhulka uu ku yareeyo jaridda afkoda ayaa qalalan, ku shub dhul badan oo ku dhow xididka.
Samee quudin. Badanaa arrintan, cirridka qoryaha, cuntada lafaha iyo isku darka diyaarinta ee bacriminta ayaa loo isticmaalaa.
Daadi cutada leh isku dar ah peat. Waxay ka badbaadin doontaa xididada qabow.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sifooyinka daawooyinka ee maskaxda iyo ku saabsan sifooyinka isticmaalka tufaaxa daawada.
Si si habboon loo jajabiyo peonies xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo sameeyo nidaamkan ugu xanaaq badan ubaxyada mustaqbalka. Si taas loo sameeyo, iska ilaali kuwa ugu caansan khaladaadka inta lagu jiro xoqitaanka:
Gooyo isla markiiba ka dib ubax. Caleemaha cusub waxay yeelan doonaan wakhti ay ku koraan oo ay barafoobaan miraayadii hore, taas oo macnaheedu tahay in aadan arki doonin geedka ubax qurxan xagaaga.
Gooyo afarta ah ee afkoda. Bushka "daboolka ah" ayaa u oggolaanaya nidaamka xididka in la cusboonaysiiyo, oo, natiijo ahaan, asalka ayaa laga yaabaa inuu qudhmo.
Iska yaree blooming inflorescences. Tani waxay khuseysaa duurka, kuwaas oo qayb ka ah dhirta dhulka. Mowjada indhaha ee indhaha ah waxay socon doontaa oo kaliya dhowr maalmood, laakiin badi ubaxa ah ee baadiyaha laftiisa sanadka soo socda ayaa si cad u yareeya.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha ugu adkaa waxay ahayd inay keenaan jaakad huruud ah. Tani waxay ku guulaysatay aqoonyahanka Japan iyo curinta Toichi Ito 1948.
Labbiska top ka dib ubax
Waqtiga sameynta kelyaha cusbooneysiinta, suurtagalka dabiiciga iyo macdanta labadaba waa muhiim. Ka hor inta aan la adeegsan Bacriminta, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo meelo ku wareegsan meesha laga jarayo afkoda. Grooves noocan oo kale ah dhar labadaba foomka qalalan iyo dareeraha labadaba.
Isla markiiba ubax ka dib, waxaad samayn kartaa xal of Doodwanaag, taas oo ka caawisaa in la xoojiyo xididada iyo formation of burooyinkeeda. Saamayntaas oo kale waxay yeelan doontaa xalka shimbirta. Bishii Agoosto, waxaad ubaahan tahay inaad hogaamiso makhraatada peony-ka. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay isku-dar ah fosfooraska iyo potassium qaybo siman. Isku dar ah waxaa lagu dabaqi karaa foomka qalalan, ka dibna ku shub oo buuxi grooves.
Ma taqaanaa? Peony waa ubaxa qaranka ee Shiinaha. Dadka Shiinuhu waxay ugu yeeraan "Cunto".
Qalab ku filan
Haddii su'aashu tahay in ay lagama maarmaan tahay in la xiro peonies xilliga jiilaalka mar hore la sii daayo, ka dibna hadda ka fikir tixgelinta marka ay dhirtaadu u baahan tahay in ay bedesho meesha ay degan tahay.
Qalab ku-tallaaliddu waa u qalantaa haddii:
baadiyaha ayaa faragelinaysa dhirta u dhow;
meesha uu baadiyaha u korayo waa mid qallalan ama aad u dhow qoyaan joogto ah;
xad-dhaaf ah / la'aanta Bacriminta ee ciidda;
acidile kordhin goobta;
Warshadda waxaa lagu beeray qoto dheer.
Waa muhiim! Burooyinkeeda dhirta waa inay ahaataa heerka 5 sentimitir oo qoto dheer ah ciidda. Haddii beerto ay aad u qoto dheer tahay, baadiyaha ayaa qudhmi kara.
Qalitaanka isugeynta waxaa lagu sameeyaa dayrta. Ka hor inta aanad qodin baadiyaha meelo kale, waa lagama maarmaan inay ku filnaato qoyaanka xididka iyo si taxadar leh u xirxiraan afkoda. Badanaa dhacdadan waxaa la qabtaa maalinta ka horeysa xubinta taranka. Geedka rootiga Poddevat wuxuu u baahan yahay fargeeto, si aanay u jebin nidaamka xididka. Kadibna duurka u guuri godka cusub, ee ku yaal. Biyaha xididada baadiyaha, ha u seexanin godka, oo kaliya markaa waxaad ku rushaysaa dhulka. Ha ilaawin in bilaha ugu horreeya ama laba jirka ka dib marka loo bedelo baadiyaha bukaanku xanuunsado. Tani waa xaalad caadi ah oo ka mid ah dhirta la isku tallaalay. Si loo hubiyo socodka degdegga ah ee muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in la abaabulo waraabinta xidid joogto ah iyo, haddii ay suurtogal tahay, buufin. Sidoo kale dhulka u dabool si fudud u helidda ogsijiinka si aad uhesho.
Waa muhiim! Xaaladda wareegga xilliga dayrta, waxaa lagula talinayaa in xididka la nadiifiyo dhul xad-dhaaf ah ama la dhaqo, guga waxaa lagula talinayaa in uu ka baxo dhulka hareeraheeda inta ugu badan ee suurtogalka ah, kaas oo ka caawin doona dhirta inuu xidid ku yeesho meel cusub.
Waa sahlan tahay in lagu helo duurka goobta ku jirta ubax gaaban, haddii aad raacdo agrotechnology gaar ah ee beerto, transplanting iyo daryeelidda warshad. Waxa ugu muhimsan - xusuuso qawaaniinta aasaasiga ah ee qodobkan, waxay kaa caawin doontaa inaad ka fogaato qaladaadka taranka foosha.